“Guusha soo daahda ayaa ah tan ugu macaan.”. Luis Suarez oo ka hadlay guushii dirqiga ay ka gaareen Valencia – Gool FM
(Spain) 22 Oktoobar 2016. Dhaliyaha Barcelona Luis Suarez ayaa sheegay in guushii dirqiga ahayd ay dhawaan ka gaareen naadiga Valencia oo ay uga adkaadeen 3-2 ay ahayd tan ugu macaan maadaama ay goolka guusha la yimaadeen waqtigii dhimashada.
Gool uu Messi ugu daah furay ayaa waxaa ka kansalay Munir El Haddadi iyo Rodrigo oo inta bar-bareeyeen u saariyay waxaase markii dambe Barca goolka u bar-bareeyay Suarez.
Daqiiqadihii lagu daray dheesha ayaa waxaa rigoore lagu galay Suarez waxaana goolka ansixiyay Lionel Messi.
Dhaliyaha reer Uruguay ayaana sheegay in guusha ceynkan oo kale ah ay awood siineyso kooxdiisa.
“Waxaan muujinay sababta aan u nahay mid ka mid ah tartamayaasha horyaalka. Waan dagaalannay tan iyo dhammaadka, natiijadanna waxay ina siineysaa awood aan horey ugu sii socono,” Suarez ayaa sidaa yiri mar uu u waramayay Barca TV.
“Wanaag aad u fiican ayaad dareemeysaa inaad guusha sidan oo kale u hesho.”.
Barcelona ayaa iminka hal dhibic ka sarreysa kooxaha ka wada dhisan Madrid ee Real iyo Atletico oo iyagu min kulan u harsan yahay.